Iran waxay diyaar u tahay 'heshiis kasta oo wanaagsan' oo wadahadalada nukliyeerka laga gaadho - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Iran waxay diyaar u tahay ‘heshiis kasta oo wanaagsan’ oo wadahadalada nukliyeerka...
Iran waxay diyaar u tahay ‘heshiis kasta oo wanaagsan’ oo wadahadalada nukliyeerka laga gaadho
Iran ayaa diyaar u ah in ay “heshiis wanaagsan” ka gaadho arrinta Nukliyeerka marka la gaadho wada xaajoodka ka dhacaya Vienna dhammaadka bishan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa Arbacadii sheegay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Hossein Amir-Abdollahian ku sheegay in ku xigeenkiisa ahna madaxa wada xaajoodka Ali Bagheri “uu ku hawlanaa wadahadalo guul ah oo ka socda Yurub” halkaasoo uu todobaadkan booqanayo London, Paris iyo Berlin.
“Miiska wadahadalka ee Vienna, waxaan diyaar u nahay inaan gaadhsiinno heshiis wanaagsan,” ayuu qoray wasiirka arrimaha dibadda.
“Ku soo laabashada dhammaan dhinacyada ballanqaadyadoodii waa mabda’ muhiim ah oo si fiican wax u hogaaminaya,” ayuu raaciyay.
Wadahadallada lagu soo celinayo heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo quwadaha adduunka ee 2015 ayaa lagu wadaa inay dib uga bilowdaan Vienna 29-ka November, ka dib markii uu hakad galay tan iyo bishii June.
Sannadkii 2018-kii, Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee uu madaxwaynihii hore ee Donald Trump ka hor yimid, wuxuuna bilaabay inuu kusoo rogo cunaqabatayn curyaamisay Iran, oo ay ku jirto mamnuucid hal dhinac ah oo la saaray dhoofinta saliidda.
Iyada oo laga jawaabayo, Iran waxay bilawday sanadka 2019 inay dib ugu soo laabato tayeynta adag ee hawlaheeda nukliyeerka ee hoos yimaada heshiiska loo yaqaan Qorshaha Guud ee Waxqabadka.
Madaxweyne Joe Biden ayaa la wareegay Aqalka Cad bishii Janaayo isagoo rajeynaya inuu ku soo laabto heshiiska, Iran waxay sheegtay inay u baahan tahay waqti ay dib u bilaabaan wadahadalada ka dib markii Madaxweyne Ebrahim Raisi uu xafiiska la wareegay bishii Ogosto.
Previous articleKumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa isugu soo baxay Sfax ka dib markii ay ka mudaaharaadayeen dhimashada
Next articleLapid wuxuu yidhi Lamaanaha lagu xidhay Turkigu ka mid ahayn hay’adaha Israa’iil.